Dilka Shacabka Oo Lagu Tartamaayo! | Xaqiiqonews
Rasaasta ciidanka Df-ka ayaa dishay 3 qof oo shacab ah gudaha magaalada Muqdisho, halka gantaal hoobiye ah oo Al-shabaab soo tuureen uu 3 caruur ah oo isla dhalatay ku dilay magaalada Baladweyn.
Dadka dhintay waxaa ka mid ah wiil iyo gabar isla dhashay kuwaasi oo askarta dowladda ay ku toogteen isgoyska dabka oo ah goob 1km wax ka yar u jirta xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
Dhacdo taasi la mid ah rasaas ay fureen askar ka tirsan isla Df-ka ayaa sababtay dhimashada Mahad C/raxmaan Megaag.
Dilalka rayidka ma ahan oo mid ku kooban Muqdisho oo kaliya, wararka ka imaanaya Baladweyne ayaa sheegaya in gantaal hoobiye ah uu haleelay guri ay daganaayeen qoys, waxaana halkaasi ku dhintay 3 caruur ah iyada oo uu dhaawac gaaray tiro kale oo caruurta ka mid ah.
Labo ka mid ah Caruurta Baladweyne ku geeriyootay ee hoobiyaha gurigooda ugu tagay
Dhacdo arintaasi xiriir la leh: Sarkaal u hadlay booliska Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in la soo qabtay eedeysanayaasha loo heysto dilka rayidka.
Hooyada dhashay Zakriye iyo Sowdo oo ahaa walaalo kuwaasi oo askarta dowladda ay toogteen iyaga oo bajaaj saaran iskgoyska dabka ayaa sheegtay in aysan fileynin cadaalad ay hesho, madaama dadkii iyada ka horeeyey ay cadaalad waayeen-sida ay hadalka u dhigtay.
Inta badan askarta dowladda ayaa si aan loo meel dayin rasaas ugu isticmaala waddooyinka saxmadda ah iyo goobaha ka agdhow xarumaha ciidanka arintaasi oo sababtay dhimasho iyo dhaawac tiro ka beel ah oo gaaray dadka rayidka ah, iyadoo intaasi ay dheertahay nidaamka isla xisaabtanka iyo laamaha cadaaladda dowladda oo ah kuwa liita ama aan jirinba.
Bishii tagtay ee Nofeembar rasaas uu furay askari dowladda ka tirsan ayaa sababtay dhimashada Hani Abdikaadir oo xiligaasi ka yimid iskool uu dhiganaayey.
Sawirka ardayka hani Abdikaadir oo ay dileen ciidamada dowladda